ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တောင်ငူ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တောင်ငူ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် တောင်ငူမြို့၊ ကေတုမတီ ..
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် တောင်ငူမြို့၊ ကေတုမတီမြို့သစ်၌ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၂၀ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့၊ ကန်ရိုးကျေးရွာရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တောင်ငူ ကျောင်းနယ်မြေအား ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူအဖြစ် လွှဲပြောင်း လက်ခံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူသည် တောင်ငူမြို့ မြောက်ဖက် ၃ မိုင်အကွာ ကန်ရိုးကျေးရွာတွင် တည်ရှိပြီး ၃၀.၂၅ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာအသုံးချ သင်တန်းများ Basic Computer Application Training.
ပထမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနည်းပညာ သင်တန်း First Year B.C.Sc / B.C.Tech).
စတုတ္ထနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း Fourth YearB.C.Sc).
တတိယနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း Third Year B.C.Sc).
ဒုတိယနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း Second Year B.C.Tech).
အခြေခံ Website ရေးသားနည်းသင်တန်းများ Basic Web Development Training.
ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု သင်တန်းများ Basic Network ing Training.
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများComputer Maintenance A+ Training.
တတိယနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း Third Year B.C.Tech).
ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း Fifth YearB.C.Tech).
အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ သင်တန်းများ Advanced Computer Application Training.
ဒုတိယနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း Second Year B.C.Sc).
ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်တန်း Fifth YearB.C.Sc).
စတုတ္ထနှစ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်း Fourth YearB.C.Tech).
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တောင်ငူမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။